Wararka - Daaweynta Biyaha Wasakhda Awoodsan: Xal macquul ah
Daaweynta Biyaha Wasakhda ah ee Fidsan: Xal macquul ah
Daaweynta biyaha wasakhda ah ee baahsan waxay ka kooban tahay habab kala duwan oo loo soo uruuriyo, loo daweeyo, loona kala diro / dib loogu isticmaalo biyaha wasakhda ah ee loogu talagalay guryaha shaqsiga ah, xarumaha warshadaha ama xarumaha, ururada guryaha ama ganacsiyada, iyo dhamaan bulshada. Qiimeyn ku saabsan xaaladaha gaarka ah ee goobta ayaa loo sameeyaa si loo go'aamiyo nooca daaweynta habboon ee goob kasta. Nidaamyadani waa qayb ka mid ah kaabayaasha joogtada ah waxaana lagu maamuli karaa inay yihiin tasiilaad keli keli ah ama lagu dhex dari karo nidaamyada daaweynta bullaacadaha ee meel dhexaadka ah. Waxay bixiyaan ikhtiyaarro kala duwan oo daaweyn ah oo fudud, daaweyn dadban oo leh firdhinta ciidda, oo badanaa loo yaqaanno 'septic or system system', iyo qaabab aad u adag oo farsamo leh sida qaybaha daaweynta ee horumarsan ee ururiya kana daweeya qashinka dhismayaal fara badan una daadanaya biyaha dusha sare. ama carrada. Waxaa sida caadiga ah lagu rakibaa barta ama agagaarka barta biyaha wasakhda ah laga soo saaro. Nidaamyada u daadanaya dusha sare (biyaha ama dusha sare ee dusha sare) waxay u baahan yihiin ruqsad Nidaam Tirtiridda Sunta Qaranka (NPDES).
• Ugu adeegto miisaanno kala duwan oo ay ku jiraan guryo shaqsiyeed, meherado, ama bulshooyinka yaryar;
• Ku daawee biyaha wasakhda heerarka difaaca caafimaadka bulshada iyo tayada biyaha;
• U hogaansanaanta xeerarka dawladaha hoose iyo gobolka; iyo
• Si fiican uga shaqee miyiga, xaafadaha iyo magaalooyinka.
MAXAA LOO SAMEEYAY DAWAYNTA QASHINKA?
Daaweynta biyaha wasakhda ah oo baahsan waxay u noqon kartaa beddel caqli gal ah bulshooyinka tixgelinaya nidaamyo cusub ama wax ka beddelaya, beddelaya, ama ballaadhinaya nidaamyada daaweynta biyaha qashinka ee hadda jira. Bulshooyin badan, daaweynta baahinta waxay u noqon kartaa:
• Kharash-ku-ool iyo dhaqaale ahaan
• Ka fogaanshaha kharashyada waaweyn
• Yaraynta kharashka hawlgalka iyo dayactirka
• Dhiirrigalinta ganacsiga iyo fursadaha shaqo
• Cagaar oo waara
• Ka faa'iideysiga tayada biyaha iyo helitaanka
• Isticmaalka tamarta iyo dhulka si xikmad leh
• Ka jawaab celinta koritaanka iyadoo la ilaalinayo meel cagaaran
• Ammaan ku ah ilaalinta deegaanka, caafimaadka bulshada, iyo tayada biyaha
• Ilaalinta caafimaadka bulshada
• Yaraynta wasakhda caadiga ah, nafaqooyinka, iyo sunta soo baxda
• Yaraynta faddarada iyo halista caafimaad ee la xidhiidha biyaha wasakhda ah
Daaweynta biyaha wasakhda ah oo baahsan ayaa xal macquul ah u noqon kara bulshooyinka cabir kasta ha lahaadee. Sida nidaam kasta oo kale, nidaamyada baahinta waa in si habboon loo qaabeeyaa, loo ilaaliyaa, loona shaqeeyaa si loo helo faa'iidooyin fiican. Halka ay ka go'an tahay inay ahaadaan kuwo ku habboon, nidaamyada baahinta ayaa ka caawiya bulshooyinka inay gaaraan saddexda hoose ee joogtaynta: u wanaagsan deegaanka, u wanaagsan dhaqaalaha, iyo u wanaagsan dadka.
HALKA AY KA SHAQAYSAY
Degmada Loudoun, VA
Loudoun Water, oo ku taal Degmada Loudoun, Virginia (Washington, DC, hareeraheeda), waxay qaadatay hanaan isku dhafan oo loo maareeyo maareynta biyaha wasakhda ah oo ay ku jiraan awoodda laga soo iibsaday warshad meel dhexaad ah, dayax gacmeedka dayactirka biyaha, iyo dhowr nidaamyo kooxeedyo yaryar. Qaabku wuxuu u oggolaaday degmadu inay ilaaliso dabeecaddeeda miyiga waxayna abuurtay nidaam koritaanka uu ku bixinayo koritaanka. Horumariyayaashu waxay naqshadeeyaan oo dhisaan xarumo biyo-wasakh oo urursan heerarka Biyaha Loudoun iyaga oo ku bixinaya kharashkooda una wareejinaya lahaanshaha nidaamka Loudoun Water si loo sii wado dayactirka. Barnaamijku waa mid iskaa u shaqeynaya iyada oo loo marayo sicirka daboolaya kharashyada. Wixii macluumaad dheeraad ah:http://www.loudounwater.org/
Degmada Rutherford, TN
Iskuxidhka Utility District (CUD) ee Degmada Rutherford, Tennessee, waxay siisaa adeegyo bulaacada qaar badan oo kamid ah macaamiisheeda banaanka iyagoo adeegsanaya nidaam cusub. Nidaamka la isticmaalayo waxaa badanaa loogu yeeraa nidaamka qashin-soo-saarka (STEP) ee hawo-mareenka oo ka kooban qiyaastii 50 nidaam biyo-hoosaad hoosaadyo ah, dhammaantoodna ku jira nidaam TALLAABO, shaandheyn ciid ah oo dib loo soo celinayo, iyo nidaam firidhsan oo qulqulaya oo badan. Dhammaan nidaamyada waxaa iska leh oo maamula Maamulka Degmada Rutherford CUD. Nidaamku wuxuu u oggol yahay horumarinta cufnaanta sare (hoosaadyada) aagagga degmada oo bulaacadaha magaalada aan laga heli karin ama noocyada ciidda aysan ku habboonayn taangiga caadiga ah ee bullaacadaha iyo khadadka bullaacadaha. Taangiga dhiiga qaada ee 1,500-gallon wuxuu ku qalabeysan yahay bambo iyo koontarool kontarool ah oo ku yaal guri kasta si loogu sii daayo soo saarista biyaha wasakhda ah nidaamka isku ururinta biyaha wasakhda ah. Wixii macluumaad dheeraad ah: http://www.cudrc.com/Departments/Waste-Water.aspx